01.11.20 Avyakt Bapdada Nepali Murli 11.04.86 Om Shanti Madhuban
श्रेष्ठ तकदिरको त स्वि र बनाउने युक्ति
आज तकदिर बनाउनेवाला बापदादाले सबै बच्चाहरूको श्रेष्ठ तकदिरको तस्विर देखिरहनु भएको छ। तकदिरवान सबै बनेका छन् तर हरेकको तकदिरको तस्विरको झलक आ-आफ्नो छ। जसरी कुनै पनि तस्विर बनाउनेले तस्विर बनाउँदा कुनै तस्विर हजारौं रूपैयाको दामको अमूल्य हुन्छ र कुनै साधारण पनि हुन्छ। यहाँ बापदादाद्वारा मिलेको भाग्यलाई, तकदिरलाई तस्विरमा ल्याउनु अर्थात् यथार्थ जीवनमा ल्याउनु हो। यसमा अन्तर हुन जान्छ। तकदिर बनाउनेले एउटै समयमा र एकले नै सबै तकदिर बाँड्नु भयो। तर तकदिरलाई तस्विरमा ल्याउने हरेक आत्मा भिन्न-भिन्न भएको कारणले जुन तस्विर बनाएका छन् त्यसमा अन्तर देखिएको छ। कुनै पनि तस्विरको विशेषता नयन र मुस्कुराहटमा हुन्छ। यी दुई विशेषताबाट नै तस्विरको मूल्य हुन्छ। त्यसैले यहाँ पनि तकदिरको तस्विरका यिनै दुई विशेषता हुन्। नयन अर्थात् रूहानी विश्व कल्याणकारी, रहमदिल र पर-उपकारी दृष्टि। यदि दृष्टिमा यी विशेषता छन् भने भाग्यको तस्विर श्रेष्ठ छ। मूल कुरा हो दृष्टि र मुस्कुराहट अर्थात् अनुहारको चमक। यो हो सदा सन्तुष्ट रहने सन्तुष्टता र प्रसन्नताको झलक। यही विशेषताले अनुहारमा रूहानी चमक आउँछ। रूहानी मुस्कान अनुभव हुन्छ। यिनै दुई विशेषताले नै तस्विरको मूल्य बढाउँछ। त्यसैले आज यही हेरिरहनु भएको थियो। तकदिरको तस्विर त सबैले बनाएका छन्। तस्विर बनाउने कलम बाबाले सबैलाई दिनु भएको छ। त्यो कलम हो– श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मको ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म र श्रेष्ठ संकल्प अर्थात् स्मृति। यो ज्ञानको कलमद्वारा हरेक आत्माले आफ्नो तकदिरको तस्विर बनाइरहेका छन् र बनाइ पनि सकेका छन्। तस्विर त बनिसकेको छ। नयन, चैन पनि बनिसकेका छन्। अब अन्तिम टचिङ्ग छ– सम्पूर्णताको। बाबा समान बन्ने। डबल विदेशीहरूले चित्र बनाउन धेरै रूचाउँछन् नि। त्यसैले बापदादाले आज सबैको तस्विर देखिरहनु भएको छ। हरेकले आफ्नो तस्विर हेर्न सक्छौ नि– कहाँसम्म तस्विर मूल्यवान बनेको छ? सदा आफ्नो यो रूहानी तस्विरलाई हेरेर यसमा सम्पूर्णता ल्याइरहनु छ। विश्वका आत्माहरूभन्दा त श्रेष्ठ भाग्यवान करोडौंमा कोही, कोहीमा पनि कोही अमूल्य वा श्रेष्ठ भाग्यवान त छौ नै तर एउटा हुन्छ श्रेष्ठ र अर्को हुन्छ सर्वश्रेष्ठ। त्यसैले श्रेष्ठ बनेका छौ वा सर्वश्रेष्ठ बनेका छौ? यो चेक गर्नु छ।
अब डबल विदेशीले रेस गर्छौ नि! अगाडि नम्बर लिनु छ वा अगाडि गएकालाई देखेर खुशी हुने हो? देखी-देखी खुशी हुन पनि आवश्यक छ, तर स्वयं पछि भएर नहेर। साथ-साथै भएर अरूलाई पनि हेर्दै हर्षित हुँदै अगाडि बढ। स्वयं पनि अगाडि बढ र पछाडि परेकालाई पनि अगाडि बढाऊ। यसैलाई भन्छन्– पर-उपकारी। यो पर-उपकारी बन्नु भनेको, यसको विशेषता हो– स्वार्थ भावबाट सदा मुक्त रहनु। हरेक परिस्थितिमा हरेक कार्यमा हरेक सहयोगी संगठनमा जति नि:स्वार्थपन हुन्छ त्यति नै पर-उपकारी हुन्छन्। स्वयं सदा भरपुर अनुभव गर्छन्। सदा प्राप्ति स्वरूपको स्थितिमा हुन्छन्। तब पर-उपकारीको अन्तिम अवस्थाको अनुभव गरेर अरूलाई पनि गराउन सक्छौ। जसरी ब्रह्मा बाबालाई देख्यौ अन्तिम समयको स्थितिमा उपराम र पर-उपकार यी विशेषता सदा देखिए। स्व प्रति केही पनि स्वीकार गर्नु भएन। न महिमा स्वीकार गर्नु भयो, न वस्तु स्वीकार गर्नु भयो। न रहने स्थान स्वीकार गर्नु भयो। स्थूल र सूक्ष्म सदा पहिला बच्चाहरूलाई। यसलाई भनिन्छ पर-उपकारी। यही सम्पन्नता र सम्पूर्णताको निशानी हो। बुझ्यौ!
मुरलीहरू त धेरै सुन्यौ। अब मुरलीधर बनेर सदा नाच्दै र नचाउँदै रहनु छ। मुरलीद्वारा साँपको विषलाई पनि समाप्त गरिदिन्छन्। त्यसैले यस्तो मुरलीधर बन, जसले कसैको जतिसुकै टर्रो स्वभाव-संस्कार भए पनि त्यसलाई पनि वश गरिदेओस् अर्थात् त्यसबाट मुक्त गरेर नचाइदेओस्। हर्षित बनाइदेओस्। अब यो रिजल्ट हेर्नु छ– को-को यस्तो योग्य मुरलीधर बन्छन्? मुरलीसँग पनि प्यार छ, मुरलीधरसँग पनि प्यार छ तर प्यारको सबूत हो जुन मुरलीधरको हरेक बच्चाहरू प्रति शुभ आशा छ– त्यो यथार्थमा देखाउनु। प्यारको निशानी हो जे भनेको छु त्यसलाई गरेर देखाउनु। यस्ता मास्टर मुरलीधर हौ नि। बन्नु नै छ, अहिले नबने कहिले बन्ने? गरौँला, यो ख्याल नगर। गर्नु नै छ। हरेकले यही सोच– मैले नगरे कसले गर्छ? मैले गर्नु नै छ। बन्नु नै छ। कल्पको बाजी जित्नु छ। पूरा कल्पको कुरा हो। त्यसैले प्रथम श्रेणीमा आउनु छ– यस्तो दृढता धारण गर्नु पर्छ। कुनै नयाँ कुरा गरेका हौ र? कत्ति पटक गरेको कुरालाई केवल रेखा माथि रेखा तानिरहेका छौ। ड्रामाको रेखा तानिएको छ। नयाँ रेखा पनि तानिरहेका छैनौ, जुन सोच्न परोस्– थाहा छैन सीधा हुन्छ वा हुँदैन भनेर। कल्प-कल्पको बनेको प्रारब्धलाई केवल बनाउँछौ किनकि कर्मको फलको हिसाब छ। बाँकी नयाँ कुरा के छ? यो त धेरै पुरानो हो, भई नै सकेको छ। यो हो अटल निश्चय। यसलाई दृढता भनिन्छ, यसलाई तपस्वीमूर्त भनिन्छ। हर संकल्पमा दृढता अर्थात् तपस्या।
बापदादा हाइएस्ट होस्ट (घरबेटी) पनि हुनुहुन्छ र गोल्डेन गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। घरबेटी बनेर मिल्नुहुन्छ, पाहुना बनेर आउनुहुन्छ। तर गोल्डेन गेस्ट हुनुहुन्छ। चम्किलो हुनुहुन्छ नि। गेस्ट त धेरै देखेका छौ तर यस्तो गोल्डेन गेस्ट देखेका थिएनौ। जसरी मुख्य अतिथि बोलाउँदा उनले धन्यवाद दिन्छन् त्यसैगरी ब्रह्मा बाबाले पनि घरबेटी बनेर इशारा दिनु भयो र अतिथि बनेर सबैलाई बधाई दिइरहनु भएको छ। जसले पूरा सीजनमा सेवा गरे, तिनीहरू सबैलाई विशेष अतिथिको रूपमा बधाई दिइरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिलो बधाई कसलाई? निमित्त दादीहरूलाई। बापदादाले निर्विघ्न सेवाको समाप्तिको बधाई दिइरहनु भएको छ। मधुबन निवासीहरूलाई पनि निर्विघ्न र हर्षित बनेर पाहुनाहरूलाई सत्कार गरेकोमा विशेष बधाई दिइरहनु भएको छ। भगवान पनि पाहुना बनेर आउनु भयो, त्यस्तै बच्चाहरू पनि। जसको घरमा भगवान पाहुना बनेर आउनुहुन्छ त्यो घर कत्ति भाग्यशाली होला। रथलाई पनि बधाई छ किनकि यस्तो पार्ट खेल्नु, कुनै कम कुरा होइन। यति शक्ति यति समयसम्म प्रवेश हुँदा धारण गर्नु, यो पनि विशेष पार्ट हो। यो समाहित गर्ने शक्तिको फल तिमीहरू सबैलाई पनि मिलिरहेको छ। त्यसैले समाहित गर्ने शक्तिको विशेषताले बापदादाका शक्तिहरूलाई समाहित गर्नु, यसलाई पनि यिनको विशेष पार्ट भन वा गुण भन। त्यसैले सबै सेवाधारीहरूमा यिनी पनि सेवाको यो पार्ट खेल्न निर्विघ्न रहिन्। यसको लागि बधाई छ र पदमापदम धन्यवाद छ। डबल विदेशीहरूलाई पनि डबल धन्यवाद किनकि डबल विदेशीहरूले मधुबनको शोभा कत्ति राम्रो बनाइदिएका छन्। ब्राह्मण परिवारको श्रृङ्गार डबल विदेशी हुन्। ब्राह्मण परिवारमा देशका साथै विदेशका पनि छन् त्यसैले पुरुषार्थको पनि बधाई र ब्राह्मण परिवारको श्रृङ्गार बनेकोमा पनि बधाई छ। मधुबन परिवारको विशेष सौगात हौ त्यसैले डबल विदेशीहरूलाई डबल बधाई दिइरहनु भएको छ। चाहे जहाँ छौ। सामुन्ने त थोरै छन् तर चारैतिरका भारतवासी बच्चाहरूलाई र डबल विदेशी बच्चाहरूलाई एकदम दिलदेखि बधाई दिइरहनु भएको छ। हरेकले धेरै राम्रो पार्ट खेल्यौ। अब केवल एउटा कुरा रहेको छ– समान र सम्पूर्णताको। दादीहरूले पनि राम्रो मेहनत गरिरहेका छन्। बापदादा दुवैको पार्ट साकारमा खेलिरहेका छन्। त्यसैले बापदादाले दिलदेखि स्नेहको साथमा बधाई दिइरहनु भएको छ। सबैले धेरै राम्रो पार्ट खेल्यौ। सबै सेवाधारी अलराउण्डर छन्। चाहे सानो साधारण सेवा होस् तर त्यो पनि महान छ। हरेकले आफ्नो पनि जम्मा गर्यौ, पुण्य पनि गर्यौ। सबै देश-विदेशका बच्चाहरूको मधुवन पुग्ने विशेषता पनि बधाई योग्य छ। सबै महारथीहरूले मिलेर सेवाको श्रेष्ठ संकल्प यथार्थमा ल्यायौ र ल्याई नै रहने छौ। सेवामा जो निमित्त छन् तिनीहरूलाई पनि दु:ख दिनु छैन। आफ्नो ढिलासुस्तीले कसैलाई मेहनत गराउनु हुँदैन। आफ्ना वस्तुहरूलाई सम्भाल गर्नु यो पनि ज्ञान हो। याद छ नि ब्रह्मा बाबाले के भन्नुहुन्थ्यो? रूमाल गुमाउनेले कुनै समय स्वयंलाई पनि गुमाउने छन्। हरेक कर्ममा श्रेष्ठ र सफल रहनु– यसलाई भनिन्छ ज्ञानी। शरीरको पनि ज्ञान र आत्माको पनि ज्ञान होस्। दुवै ज्ञान हरेक कर्ममा चाहिन्छ, शरीरको बिमारीको पनि ज्ञान हुनुपर्छ– मेरो शरीर कुन विधिले ठीक चल्न सक्छ? यस्तो होइन आत्मा त शक्तिशाली छ शरीर जस्तोसुकै होस्। शरीर ठीक भएन भने योग पनि लाग्दैन। शरीरले आफूतर्फ खिँच्छ त्यसैले ज्ञानी हुनुमा यी सबै ज्ञान पनि आउँछन्। अच्छा।
केही कुमारीहरूको समर्पण समारोह बापदादाको सामुन्ने भयो
बापदादाले सबै विशेष आत्माहरूलाई अत्यन्तै सुन्दर सजावट देखिरहनु भएको छ। दिव्य गुणहरूको श्रृङ्गार कत्ति राम्रो छ, सबैलाई शोभायमान बनाइरहेको छ। लाइटको ताज कत्ति सुन्दर चम्किरहेको छ। बापदादाले अविनाशी श्रृङ्गारिएका अनुहारलाई देखिरहनु भएको छ। बापदादालाई बच्चाहरूको यो उमंग-उत्साहको संकल्प देखेर खुशी हुन्छ। बापदादाले सबैलाई सदाको लागि मन पराउनु भयो। तिमीहरूले पनि पक्का मन पराएका छौ नि! दृढ संकल्पको वाचा बाँधियो। बापदादाको पासमा हरेकको दिलको स्नेहको संकल्प सबैभन्दा छिटो पुग्छ। अब संकल्पमा पनि यो श्रेष्ठ बन्धन लुज हुँदैन। त्यति पक्का बाँधिएको छ नि! कति जन्मको लागि प्रतिज्ञा गर्यौ? यी ब्रह्मा बाबाको साथमा सदा सम्बन्धमा आउने पक्का प्रतिज्ञा छ भने ग्यारेन्टी पनि छ– सदा भिन्न नाम, रूप, सम्बन्धमा २१ जन्मसम्म त साथ रहन्छौ नै। त्यसैले कत्ति खुशी हुन्छ! हिसाब गर्न सक्छौ। यसको हिसाब निकाल्नेवाला कोही निस्किएको छैन। अब यस्तै सदा सजिसजाउ रहनु, सदा ताजधारी रहनु र सदा खुशीमा हाँस्दै-गाउँदै रूहानी मोजमा रहनु। आज सबैले दृढ संकल्प गर्यौ नि– कदममा कदम राख्ने छौं। त्यहाँ त स्थूल पाउ माथि पाउ राख्छन् तर तिमीहरू सबै संकल्प रूपी कदममा कदम राख्नेवाला बन्छौ। जुन बाबाको संकल्प त्यो बच्चाको संकल्प हुनु पर्छ– यस्तो संकल्प गर्यौ? एक कदम पनि बाबाको कदम सिवाय यताउता नहोस्। हर संकल्प समर्थ बनाउनु अर्थात् बाबा समान कदमको पछाडि कदम राख्नु। अच्छा।
विदेशी भाइ-बहिनीहरूसँग : – जसरी विमानमा उडेर आयौ त्यसैगरी बुद्धि रूपी विमान पनि त्यति नै चाँडो उडिरहन्छ नि! किनकि त्यो विमान परिस्थितिवश नमिले पनि बुद्धि रूपी विमान सदा साथ छ र सदा शक्तिशाली छ त्यसैले सेकेण्डमा जहाँ चाहन्छौ त्यहाँ पुग्छौ। यस्तो विमानको मालिक हौ नि। सदा यो बुद्धिको विमान तयार रहोस् अर्थात् सदा बुद्धिको लाइन स्पष्ट होस्। बुद्धि सदा बाबाको साथमा शक्तिशाली छ भने जब चाह्यो तब सेकेण्डमा पुग्छौ। जसको बुद्धिको विमान पुग्छ उसको त्यो विमान पनि चल्छ। बुद्धिको विमान ठीक भएन भने त्यो विमान पनि चल्दैन। अच्छा।
पार्टीहरूसँग : –
१) सदा आफूलाई राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्छौ? राजयोगी अर्थात् सर्व कर्मेन्द्रियका राजा। राजा बनेर कर्मेद्रियहरूलाई चलाउनेवाला, नकि कर्मेन्द्रियहरूको अधिन भएर चल्नेवाला। जो कर्मेन्द्रिय वश भएर चल्नेवाला छन् तिनीहरूलाई प्रजायोगी भनिन्छ, राजयोगी होइन। ज्ञान मिलेको छ– यी कर्मेन्द्रियहरू मेरा कर्मचारी हुन्, म मालिक हुँ, त्यसैले मालिक कहिल्यै सेवाधारीहरूको वश हुन सक्दैन। जतिसुकै कसैले प्रयत्न गरोस् तर राजयोगी आत्माहरू सदा श्रेष्ठ रहन्छन्। सदा राज्य गर्ने संस्कार अहिले राजयोगी जीवनमा भर्नु छ। जेसुकै होस्– यो आफ्नो टाइटल सदा याद राख्नु– म राजयोगी हुँ। सर्वशक्तिमानको बल छ, भरोसा छ त्यसैले सफलता अधिकारको रूपमा मिलेको छ। अधिकार सजिलै मिल्छ मुश्किल छैन। सर्व शक्तिहरूको आधारमा हरेक कार्य सफल भइ नै सकेको छ। सदा खुशी रहोस्– म दिलतख्तनशीन आत्मा हुँ। यो खुशीले अनेक चिन्ताबाट पार गरिदिन्छ। खुशी भएन भने चिन्ता नै चिन्ता हुन्छ। त्यसैले सदा खुशीमा रहेर वरदानी बनेर वरदान बाँड्दै जाऊ। स्वयं सम्पन्न बनेर अरूलाई सम्पन्न बनाउनु छ। अरूलाई बनाउनु अर्थात् स्वर्गको सीटको सर्टिफिकेट दिन्छौ। कागजको सर्टिफिकेट होइन, अधिकारको। अच्छा।
२) हर कदममा पदमको कमाई जम्मा गर्ने, अखुट खजानाको मालिक बन्यौं– यस्तो खुशीको अनुभव गर्छौ! किनकि आजकलको दुनियाँ छ नै धोकेबाज। धोकेबाज दुनियाँबाट छेउ लाग्यौ। धोका दिने दुनियाँसँग लगाव त छैन! सेवा अर्थ सम्बन्धमा आउनु अर्को कुरा हो तर मनको लगाव हुनु हुँदैन। त्यसैले सदा आफूलाई तुच्छ होइन, साधारण होइन, श्रेष्ठ आत्मा हुँ, सदा बाबाको प्रिय हुँ– यही नशामा रहनु। जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चा– कदममा कदम राख्दै अर्थात् अनुसरण गर्दै गयौ भने बाबा समान बन्छौ। समान बन्नु अर्थात् सम्पन्न बन्नु। ब्राह्मण जीवनको यही त कार्य हो।
३) सदा आफूलाई बाबाको रूहानी बगैँचाको रूहानी गुलाब सम्झन्छौ! सबैभन्दा सुगन्धित पुष्प गुलाब हुन्छ। गुलाबको जल कति कार्यमा लगाउँछन्। रङ्ग रूपमा पनि गुलाब सर्वप्रिय छ। त्यसैले तिमीहरू सबै रूहानी गुलाब हौ। तिम्रो रूहानी सुगन्धले अरूलाई पनि स्वत: आकर्षित गर्छ। जहाँ पनि कुनै सुगन्धिन चीज भयो भने सबैको ध्यान स्वत: नै जान्छ त्यसैले तिम्रो रूहानी गुलाबको सुगन्धले विश्वलाई आकर्षित गर्ने छ किनकि विश्वलाई यो रूहानी सुगन्धको आवश्यकता छ त्यसैले सदा स्मृतिमा रहोस्– म अविनाशी बगैँचाको अविनाशी गुलाब हुँ। कहिल्यै ओइल्याउनेवाला होइन, सदा फक्रिएको। यस्ता फक्रिएका रूहानी गुलाब सदा सेवामा स्वत: नै निमित्त बन्छन्। यादको, शक्तिको, गुणहरूको– यी सबै सुगन्ध सबैलाई दिँदैरहनु छ। स्वयं बाबा आएर तिमी फूलहरूलाई तयार गर्नु भएको छ त्यसैले कत्ति सिकीलधे छौ! अच्छा।
न्यारा र प्यारा बन्ने रहस्य जानेर राजी रहने राजयुक्त भव
जुन बच्चाले प्रवृत्तिमा रहेर न्यारा र प्यारा बन्ने रहस्य जानेको हुन्छ, ऊ सदा स्वयं पनि स्वयंसँग राजी रहन्छ र प्रवृत्तिलाई पनि राजी राख्छ। साथ-साथै सच्चा दिल भएको कारणले साहेब पनि सदैव उस प्रति राजी रहनुहुन्छ। यस्ता राजी रहने राजयुक्त बच्चालाई आफू प्रति वा अन्य प्रति कसैलाई काजी बनाउने आवश्यकता रहँदैन किनकि उसले आफ्नो फैसला आफैँले गर्छ। त्यसैले उसलाई कसैलाई काजी, वकिल वा जज बनाउने आवश्यकता पर्दैन।
सेवाबाट जुन आशीर्वाद मिल्छ, त्यो आशीर्वाद नै तन्दुरुस्तीको आधार हो।